Kedu ihe Ọchịchị na-eto? Lee Usoro 15 | Martech Zone
Kedu ihe Ọchịchị na-eto? Lee Usoro 15
Usoro ahụ hacking na-enwekarị echiche na-adịghị mma metụtara ya ka ọ na-ezo aka na mmemme. Ma ọbụna ndị na anataghị ikike mmemme na-mgbe niile na-eme ihe iwu na-akwadoghị ma ọ bụ na-akpata nsogbu. Hacking bụ mgbe ụfọdụ a workaround ma ọ bụ a shortcut. Itinye otu mgbagha maka ịzụ ahịa na-arụkwa ọrụ. Nke ahụ bụ ibu hacking.
Ebu ụzọ tinye ha na-etolite etolite startups onye ọ dị mkpa iji wuo mmata na nkuchi… mana enweghị ahịa mmefu ego ma ọ bụ ihe onwunwe iji mee ya. Sean Ellis dere okwu a na blọọgụ ya na 2010 na post akpọrọ Chọta onye na - eto eto maka mbido gị ebe o choputara Growth Hacker dika uzo ozo igota ahia, oge ahia.
A hụrụ mgbe ọ bụla a na-eto eto dị ka onye nnọchi nke usoro ọdịnala, nke ogologo oge na atụmatụ dị mkpụmkpụ na-elekwasị anya n'ịgbalite ngwa ngwa na nnata ego. N'afọ iri gara aga, agbanyeghị, ụlọ ọrụ nha ọ bụla hụrụ uru nke mbanye anataghị ikike ma ụlọ ọrụ ndị isi yana obere mbido na-anabata ya.
Omenala ahia na ntaneti na ntanetị nwere ike ime ka ụlọ ọrụ nwee nnukwu uto, usoro ndị ahụ na-eto eto ụlọ ọrụ nwayọ nwayọ. Agbanyeghị, enwere ụzọ iji wulie ma ọ bụ kụọ ahịa gị site na usoro ndị na-abụghị ọdịnala.
Ọ bụ ezie na enweghị m mmasị n'onwe m n'okwu ahụ hacking, ọ rapaara dị ka okwu a na-arahụ mainstream (na mgbe n'elu-eji). N'uche m, usoro ịre ahịa azụmaahịa kwesịrị iji usoro ọdịnala, ogologo oge na usoro ị ga-eji na-eto eto n'ụzọ dị irè.
Gini bu nkowa okwu nke Oto?
Uto hacking bụ atụmatụ azụmaahịa nke na-eji ma ihe okike na ụzọ a na-akwadoghị iji nweta ọtụtụ ekpughere na ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị na-enweghị nnukwu ego. Ejiri okwu a na mmalite mmalite teknụzụ ndị na-enweghị usoro azụmaahịa, mana enwere ike iji njikarịcha ọchụchọ, njiri mara mmadụ, mepụta ihe. nchịkọta, na ule iji bulie ọnụnọ ha n'ịntanetị ngwa ngwa.
Uto Hacking Strategies na Usoro
Eliv 8 mepụtara ọmarịcha ihe omuma a na nchịkọta nke usoro 15 kacha mma na usoro ha:
Pịa n'ime ndị na-ege ntị nke atọ - E kwuru banyere ịde blọgụ ndị ọbịa, mana pọdkastị bụ nnukwu ụzọ iji banye ndị ọzọ. Anyị na-akpọkarị ndị na-eme ihe ike na ụlọ ọrụ anyị na pọdkastị anyị ka ndị ntị ha nwee mmasị.
Na-ebuputa nyiwe nke atọ - Nke a bụ nnukwu echiche. Anyị nwere nnukwu ndepụta nke saịtị ntanetị iji akaụntụ ma ọ bụ kwalite ngwaahịa gị ebe a.
Ebumnuche ndị na-akwado gị - Ngwaọrụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya na-akwụ ụgwọ yana iji mata ndị na-eso ụzọ gị. Ọ bụrụ na ị nwere ike inyere ha aka, gịnị ma ị kpọtụrụ ha? Y’oburu n’inwere ike kari ndi mpi gi ma nyere ndi ahia ha aka… ha nwere ike ibu isi gi.
Mepụta Ọdịnaya Gị Njem zụ ahịa - Zaa ajụjụ ndị na - azụ ahịa na - enyocha ọnlaịnụ.
Mepụta Ọdịnaya Peeji Peeji - Anyị na-eji mgbasa ozi siri ike nke ezubere iche dabere na otu edemede ahụ, na-enye ndị na-agụ akwụkwọ ozi oku dị mkpa.
Mee akwukwo ozi edeputara - Kewaa ndị ahịa gị site na atụmanya gị ma kụziere ha ngwaahịa na ọrụ gị.
Hazie Ahụmahụ ahụ - Kedu ihe ị ga-agbakwunye na ibe gị nke ahaziri onye ọbịa ma ọ bụ kewaa ha? Ha abụrụla ndị ahịa? Ha na-alaghachi? Ha na-pịa njikọ ntinye aka? Ọ bụrụ n ’ị nwere ike ịkọ ahụmịhe dabere na ndị ha bụ, ị nwere ike ịchụpụ ọrụ ntụgharị ka mma.
Nkwupụta Nkwupute Mwepu - Nke a bụ nnukwu ụzọ aghụghọ ọ bụla ikpo okwu ecommerce ga-enwerịrị. Ọ bụ ohere ịchụso mmadụ iji tọghata ya na ọnọdụ ndị ọzọ gburugburu azụmahịa ma ọ bụ ọbụna onyinye.
Njikere ndi ọbịa - Anyị na-ewepụta asọmpi ụfọdụ n’oge na-adịghị anya Ndewonu, usoro ikpo okwu siri ike na asọmpi a nwapụtara, nke na-agba ọsọ na saịtị gị yana saịtị mmekọrịta gị.
Wulite Obodo Nanị - Nke a na-ewe ọrụ, ma ọ bụrụ na i nwere ike gbanwee ndị na-ege gị ntị ka ọ bụrụ obodo, ị nwetara ihe kasị mma azụmahịa mmepe mkpara ego nwere ike ịzụta. PS: Nke a siri ike, n'agbanyeghị!
Azụlite na-eduga na akpaghị aka - Anyị na e mejuputa atumatu nurturing na akpaaka maka ahịa anyị na-eji Ọchịchọ - uzo di oke onu ahia - ma nweta ihe di egwu.
Shagwọ Ọrụ Regwọ na Ntuziaka - Ndị mmadụ nwere ike ịme ihe enyi ha gwara ha mee. Ọ bụrụ n’inweta usoro ihu taa, ị kwesịrị ịnwe mmemme iji ya tinye ya.
Retargeting Mgbasa ozi esighi na - Weghachite ndị ọbịa na ebe nrụọrụ weebụ gị na mgbasa ozi na-eso ha. Iweghachi ego nwere ike ime ka ọchụchọ ọchụchọ rịa elu ruo ihe dị ka 1,000% wee gaa nleta site na 720% mgbe izu anọ gachara.
Jiri Data Gị - 50% nke azụmaahịa na-esiri ike ịkọwa ahịa maka nsonaazụ ego. Tinye n'ọrụ data na nchịkọta ga-emeziwanye ROI gị.
Mee Ihe Na-agaghị Ọkara - Nọgide na-echebara ohere dị iche iche ma gbalịsie ike ịmata usoro mbanye anataghị ikike ndị ọzọ.
Aga m gbakwunye usoro nke m kacha amasị m ebe a…
iji Semrush, M mata peeji nke m na saịtị kwubara na n'etiti 2nd na nke 10 ọnọdụ, M na-ele ndị mpi na peeji nke, ideghari na-ebuli peeji nke na ozi ndị ọzọ, mma ndịna, ụfọdụ ọnụ ọgụgụ… na republish ya dị ka ọhụrụ. Mgbe m mere nnukwu ọrụ nke ahụ ma weghachite ibe ahụ, m na-ahụkarị ka ọ na-enwekwu ọhụhụ na ọkwa dị elu ka ndị mmadụ na-ekerịta ma na-ezo aka na ya.
E nwere ụfọdụ ihe ntanetị ndị ọzọ n'ịntanetị, gụnyere Eliv 8, Reddit, Ndị na -eto eto GrowthHackers, Na Ntuziaka Hacking na-eto eto.
Tags: ntinyeagbahapụ agbahapụn'asọmpidataemail nkewaibu hackingibu hacking echicheuto hacking usoroblogging ọbịandewokeonwereferralsretargetingụgwọ ọrụmgbasa ozi mgbasa oziezubere iche maka ndepụta emailezubere iche ndepụtatestimonialsgịnị bụ ibu hacking
ShortStack: Valentpo inebọchị Social Media Egwuregwu Echiche
Sep 29, 2016 na 3: 11 AM
M na-agụ gị isiokwu, a post bụ akpali nnọọ mmasị banyere ibu hacking. m soro ihe niile dika ị na-ekwu n'isiokwu gị. ndị a niile ihe atụ ndị kasị mma maka ibu hacking. Daalụ